Plastic jekiseni richigadzirisa - Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co., Ltd.
Plastic jekiseni Kuumbwa
Chipurasitiki jekiseni kuumbwa maitiro inoreva kusungunuka kwezvinhu zvakasvibirira kuburikidza nekumanikidza, jekiseni, kutonhora, kubva mukushanda kwechimwe chimiro chemasemi-apera zvikamu zveichi chiitiko.
Iyo yekugadzira nzira yekugadzira zvikamu muhombe vhoriyamu. Iyo inowanzo shandiswa mukuwanda-kugadzirwa kwemaitiro uko chikamu chimwe chete chiri kugadzirwa zviuru kana kunyangwe mamirioni enguva mukuteedzana.
Yedu yepurasitiki jekiseni kuumbwa maitiro inoburitsa tsika prototypes uye magumo-kushandisa zvigadzirwa zvigadzirwa mumazuva gumi nemashanu kana zvishoma. Isu tinoshandisa simbi muforoma tooling (P20 kana P20 + Ni) iyo inopa iyo inopa mutengo-unoshanda ekushandisa uye nekukurumidza maitiro ekugadzira.
yakakwira mwero yekushandisa
ku epurasitiki mhando
Zvigadzirwa zvine mvere
pamusoro uye hapana kukwenya
DZIDZA ZVAKAWANDA NEZVEDU Kambani
Radiator Rubber Isolators, Bass Radiator, Passive Bass Radieta, Radiator Rubber Gomo, Passive Radieta, Diki Aluminium Led Radieta,